Dagaal Gacan-ka-hadal Gaadhay Oo Dhexmaray Ilaalada Ra'iisal-wasaaraha Israa'iil iyo Ilaalada Madaxweyne Afrikaan Ah - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Dagaal Gacan-ka-hadal Gaadhay Oo Dhexmaray Ilaalada Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil iyo Ilaalada Madaxweyne Afrikaan Ah
Monrovia(ANN)- Dagaal gaadhay gacan-ka-hadal, ayaa dhexmaray ilaalada Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil iyo kuwa Madaxweynaha dalka Togo oo ka wada qaybgalay shir-madaxeedka urur-goboleedka ECOWAS oo ay ku bahoobeen dalalka galbeedka qaaradda Afrika oo lagu qabtay caasimadda waddanka Liberia ee Monrovia.
Kulan ay wada qaadan lahaayeen Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil Mr. Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha dalka Togo Mr. Faure Gnassingbé, ayaa dib loo dhigay kadib markii muran gacan-ka-hadal gaadhay uu dhexmaray ilaalada labada hoggaamiye kala wateen, sida uu daabacay wargeyska Times of Israel cadadkii soo baxay shalay.
Wargeyska ayaa sheegay in is-jiid-jiid iyo gacan-qaad dhexmaray labada ciidan, kadib markii mid ka mid ah ilaalada Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil uu u diiday kuwa Madaxweynaha Togo inay gudaha u galaan kulan labada masuul ku wada yeelan lahaayeen magaalada Monrovia oo xarun u ah dalka Liberia maalintii Sabtida ee toddobaadkan.
Madaxweyne Gnassingbé iyo Ra’iisal-wasaare Netanyahu ayaa ka qaybgalayey shir ay lahaayeen dalalka ku bahoobay urur-goboleedka Galbeedka Afrika ee Ecowas.
Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil ayaa ammaanay ka qaybqaadashada shirka waddamada Ecowas oo markii ugu horreysay lagu casuumay, taas oo uu ku tilmaamay tallaabo taariikhi ah.
Wargeyska the Jerusalem Post ayaa ka soo xigtay Mr. Netanyahu, “Waa markii koowaad ee ururka Ecowas uu shirkooda ku casuumo masuul ka socda dal ka baxsan qaaradda Afrika. Aad ayaan uga mahadcelinayaa. Israa’iil waxay ku soo laabatay Afrika, iyada oo miisaan leh.”